Baarlamaanka Galmudug oo ku kulmay Dhuusamareeb – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Waxaa maanta markii ugu horeysay Magaalada Dhuusamareeb kulan ku yeeshay Xildhibaanada Baarlamaanka Maamul Goboleedka Galmudug.
Kulankan ayaa shir guddoominayay Guddoomiyaha Baarlamaanka Maamulka Galmudug Cali Gacal Casir, ayaa waxaa looga dooday wax ka badalka Xeer hoosaadka Baarlamaanka, isbarashada Xildhibaanada labada dhinac iyo dib u eegista Dastuurka Galmudug.
Xildhibaan Maxamed Cabdulle ayaa sheegay in kulamada Baarlamaanka Maamulka Galmudug xilligan wixii ka dambeeya ay ku shaqeyn doonaan Magaalada Dhuusamareeb ee Xarunta Maamulka Galmudug.
Al Shabaab oo sheegatay Xildhibaan lagu dilay Muqdisho